Ukutyeba nangakumbi ngemodyuli yekhamera, kuya kuba njalo nge-iPhone 13 | IPhone iindaba
Ukujiya kunye nemodyuli yekhamera engaphezulu, le iya kuba yi-iPhone 13
IPhone 13 Sele itafile yamahemuhemu, sisiphi isisombululo xa kuthathelwa ingqalelo ukuba kukho malunga neenyanga ezintlanu de kumiselwe okutsha. Kancinci kancinci sifunda ngakumbi ngeenkcukacha bamba nge-tweezers kuba asazi ukuba zingaphi eziza kuphelela ekubeni ziyinyani
Ngokokuvuza, Yonke into ibonisa ukuba i-iPhone entsha iya kutyeba kancinci ukubeka ibhetri ngakumbi, kunye nemodyuli yekhamera ebonakalayo. Kubonakala ngathi ixesha apho iApple yayizimisele ukwenza izixhobo ukuba zingciphe kwaye zibhitye rhoqo zihleli ngasemva, ucinga ntoni nge-twist entsha kuyilo?
Ngokutsho MacRumors, ulwazi olufunyenweyo lubonisa ukuba I-iPhone 13 entsha kunye ne-iPhone 13 Pro iya kuba nobukhulu beemilimitha eziyi-7,57, xa kuthelekiswa nobukhulu be-7,4 millimeter efumaneka kwi-iPhone 12 kunye nokwahluka kwayo. Oku kubonisa ukonyuka kwee-millimitha eziyi-0,17, nangona kunjalo, ukunyaniseka, akufuneki kube kukonyuka okubonakalayo kuninzi lwabasebenzisi. Okwangoku, kuqinisekisiwe ukuba ngokubanzi i-iPhone 13 iya kuba noyilo olufanayo ne-iPhone 12 kodwa ngotshintsho oluncinci, oko kukuthi, siyaqhubeka nokubheja kwisakhelo esithe tyaba, iglasi engaphambi kweglasi kunye nomqolo onemibala.
Kuyafana nakwimodyuli yekhamera. Eli candelo ligxekwayo le-iPhone liya kukhula nalo, kodwa kule meko ngakumbi. Ngelixa i-iPhone 12 yayinobunzima obuyi-1,5 okanye i-1,7 yeemilimitha ubukhulu ngokuxhomekeka kwimodeli, i-iPhone 13 ayizukuya kwinto engaphantsi kobubanzi obujikeleze iimilimitha ezi-3,6, emele ukukhula okungaphezulu kokuphindwe kabini. Oku ngokuqinisekileyo kukhomba kwifowuni entsha enokusondeza ngakumbi okanye uzinzo olungcono koomatshini beekhamera. Okwangoku, sizakuqhubeka silinde iindaba zolu luhlu lutsha lwe-iPhone 13 oluza kufika esiphelweni salo nyaka uzayo ka-2021, siya kukugcina unolwazi, njengesiqhelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » Ukujiya kunye nemodyuli yekhamera engaphezulu, le iya kuba yi-iPhone 13
I-iPhone 12 Pro Max ifikelela kwindawo yesine kuthelekiso lwebhetri yokuqala ye-DXOMark